Ubuntu 15.04 Vivid Vermet, ihe ị ga-atụ anya ya? | Site na Linux
Mwepụta nke ụdị ọhụrụ nke Ubuntu na-eru nso, dị ka anyị nọ na Eprel 2015 ka ọtụtụ ndị maraworị, ọnụọgụ ga-abụ: 15.04, Aha Ezigbo Vermet.
Naanị ụnyaahụ ọ banyere na njedebe ikpeazụ ya, nke pụtara na ọ ga-adị njikere… ọ gaghị enweta atụmatụ ọhụụ ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya, ọ ga-arụ ọrụ na isi chinchi ma ọ bụ ihe ọ bụla. Echere m, oge mkpokọta ikpeazụ bụ ihe Debian na-ewe ọnwa, mana Ubuntu mere ya na izu ole na ole LOL!
Otú ọ dị, ụdị Ubuntu a na-abịa na ọtụtụ mgbanwe dị ịrịba ama, gbanwee site na init ka usoro ... kernel ọhụrụ ... ndozi na ịdị n'otu, wdg, anyị ga-akọwa ụfọdụ n'ime ihe ndị a ntakịrị.
1 ịdị n'otu 7
2 Kernel na init… ehm, m pụtara, systemd
3 Mkpebi Ubuntu 15.04
ịdị n'otu 7
Ịdị n'Otu, ihe meputara (ma na-aga n'ihu na-emepụta, ọ bụ ezie na ọ pere mpe) ọtụtụ esemokwu, tumadi n'ihi ntinye nke Canonical, ugbu a ọ na-eweta mgbanwe na menu ngwa. Ruo ugbu a naanị anyị hụrụ menu a (ị maara, Faịlụ, Dezie, wdg) mgbe anyị hours cursor na òké ebe ọ kwesịrị ịbụ, na obubọk, ọma… ugbu a menu ga-hụrụ bụghị na desktọọpụ panel dị ka ndị dị otú ahụ, ma ihe 'na mpaghara', na n'elu mmanya nke ọ bụla ngwa.
Dị n'otu 7.3 na-ewetakwa Dash, HUD, ụfọdụ mmemme ndị ọhụrụ ... wdg.
Dị ka a hụworo, ha edozila ụfọdụ chinchi nke mere Compiz na ndị ọkwọ ụgbọala Nvidia nwere njehie. Ọzọkwa, ha na-ekwu Compiz 0.9.12 ugbu a nwere nkwado njikọta zuru oke na MGBE.
Kernel e init Oh, m bu n'uche, systemd
Agaghị m akwụsị ikwu maka uru na ọghọm nke systemdAnyị ekwuola banyere ya (na ọtụtụ ihe ndị ọzọ) ebe a na DesdeLinux ... ihe bụ na ụdị ọhụrụ nke Ubuntu ga-eji sistemụ ma ọ bụghị.
Non ga-amaja sị mba. Onye ọ bụla na-eji kọmputa maka multimedia, ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ọrụ ọfịs, ya bụ, ọ bụghị usoro nchịkwa nchịkwa ... ọ dịghị mkpa ịhụ mgbanwe a, mana hey, ka anyị hụ ka Ubuntu si mejuputa ya 😀
Ọzọkwa, Ubuntu 15.04 ga-abịa na Linux kernel mbipute 3.19.3 emelitere ngwa, dị ka ọ dị na mbụ
Dị ka ọ dị na mbụ, Ubuntu nke ọ bụla na-abịa na ngwanrọ emelitere, LibreOffice, Firefox, Chromium, wdg. Mgbe ahụ ọ bụrụ na ha chọrọ iji PPAs nke ọma ... ha nwere ike ịnwe ngwanrọ emelitere ọzọ, ọ bụ ezie na ọkwa nke nkwụsi ike nke sistemụ nwere ike imetụta 😉
Mkpebi Ubuntu 15.04
Ndị nwere mmasị ịnwale ụdị Ubuntu a nwere ike ibudata ya betan'agbanyeghị nke ahụ ulo oru mwepụta nke ikpeazụ na anụ version bụ Eprel 23th nke afọ a 2015, ya mere nchere agaghị adị ogologo oge.
Na nkwụsi ike, ọ bụ Ubuntu ... anyị ga-ahụ etu o si akpa agwa.
Ọ bụghị na m na-akatọ Ubuntu mgbe niile, ọ bụ otu n'ime ọgba aghara na-eweta ọtụtụ ndị ọrụ na Linux anyị ... mana ọ bụkwa otu n'ime ndị na-efufu ndị ọrụ (ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke kachasị), nke ahụ bụ , ndị ọrụ kwụsịrị iji distro a iji ọzọ, ma Linux Mint, Fedora, Arch ma ọ bụ Debian, ọ bụ maka ihe ma ọ bụ? ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Ubuntu 15.04 Vivid Vermet, ihe ị ga-atụ anya ya?
Enwere m olile anya site na Ubuntu, na n'ọdịnihu ha ga-emeziwanye ike ike, batrị m na-adị naanị nkeji 30, yana Windows ọ ga-ewe awa 2.
Ebe ọ bụ na ha na-emepe usoro maka mobiles, ngwa ha kwesịrị ikwekọ na PC desktọọpụ, ha kwesịrị iji ihe atụ sitere na Microsoft, ngwa m na-eji na windo windo m, enwere m ike iji ha na windo 8.1.
»Were Microsoft nlereanya»? N'ezie microsoft ewerewo echiche ahụ site na Canonical, ihe dị iche bụ na microsoft nwere ụzọ iji mee ya na 1 afọ na mkpa Canonical 3 ma ọ bụ 4.
Mana ee, ihe Ubuntu na-achọ na sistemụ mkpanaka ya bụ njikọta na desktọọpụ, nke ga-abịa na Unity 8, na tiori maka 2016 ...
Mozilla na-eme otu ihe ahụ na Firefox OS yana n'ọma ahịa ya jupụtara na ngwa weebụ dabara na Firefox (ha abanyelarị na echiche Mozilla Prism).
Enwere m Linux na 1/2 awa (yana obere okpomọkụ) na Linux karịa na Windows 7, enwere m ndị ọkwọ ụgbọala nweere onwe ha. Chọọ ụzọ maka onwe gị! Ọ bụ naanị ya
Na ntuziaka a http://www.taringa.net/posts/linux/18073964/Optimizacion-de-energia-Dell-Inspirion-5521.html, Enwetara m batrị Dell m ka ọ nọrọ ihe dị ka elekere 6 site na ịnwe taabụ 10 na firefoz na ikiri vidiyo na youtube.
Ikekwe ihe m ga-achọ ọtụtụ banyere Ubuntu (Canonical na agbanyeghị), bụ na okwu banyere ịhapụ ụdị ọhụrụ kwa ọnwa isii ọ bụla na-agwụ, ọ dị m ka otu ọrụ otu ọrụ na-enweghị isi na-enweghị isi site na echiche ọ bụla. Ma eleghị anya, ị ga-esi na LTS gaa LTS ma nye mmelite nche dị ka ihe kwesịrị ekwesị ma tinye ngwa dị ka ụdị "nkwụsi ike" pụtara.
Ndị Canonical emeela nnukwu ihe na-aga n'ihu ma na-eme ka Linux dịrịkwuo nso na ndị nkịtị, ebe ọ bụ na mgbe ọ bụla mmadụ chọrọ ịga n'akụkụ a, ha na-eme ya site na Ubuntu ma ọ bụ ihe nkwekọrịta, enweghi ọtụtụ ndị na-ahụ maka distro a.
Nke a ga-abụ ihe m chọrọ, ma eleghị anya, m na-atụ anya ya, mana "Hard-hiting Distros ™" ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na enwere ọtụtụ nsogbu mgbe niile ma na-agbakasị ndị ọrụ na-enweghị ahụmahụ ma ọ bụ ndị ọhụụ.
Nzọụkwụ ezi uche ga-abụ maka Canonical ka ọ lekwasị anya na nnukwu ihe dị mgbagwoju anya iji jikọta azụmahịa ha, ma ọ bụrụ na ha mee nke ahụ, ha na-ahapụ ọtụtụ ndị mmadụ. Ya mere, ịhapụ LTS na LTS Echeghị m na ọ bụ ezigbo nhọrọ ọ gwụla ma ha mere otu ihe ahụ dị ka Debian.
Abụ m onye ọrụ Linux ọhụụ, agbalịrị m ụfọdụ distro mana ọ mechara kwenye m Ubuntu yana ịdị n'otu ya na ihe niile. Amalitere m na Linux na August nke afọ gara aga ma gara 14.04 LTS.
Ma nke ahụ bụ ebe ajụjụ m na-aga: mbipute ọhụrụ a 15.04 abụghị LTS? Amaara m na LTS ọ bụla na-akwado afọ 5, mana amaara m na 12.04 bụkwa LTS. Yabụ afọ ole ụdị ụdị a na-apụta?
Huy, Ubuntu nwale dika Debian, agaghi m apu na nke a 😀 Ma na Xfce 😀
Sergo S, na ibe Ubuntu bụ ozi niile. LTSs na-apụta kwa afọ 2 na, dịka nke 14.04, ha nwere nkwado 5 afọ. LTS ọzọ na-apụ n'afọ ọzọ
Versionsdị nsụgharị ndị na-apụta n'etiti LTS bụ "ule", ọ bụ ya mere ha ji adị ntakịrị. LTS bụ ndị kwesịrị ịnụ ụtọ (mbipụta ndị a bụ ezigbo ihe mgbagha nke Debian, site na mmelite mbụ, ha malitere inwe mmekọrịta ka ukwuu na nsụgharị ikpeazụ nke Debian).
Rolling releases dị ka Arch ma ọ bụ Antergos bụ Distros na Nsogbu ™. Ọ bụ ya mere na anaghị m eji ha eme ihe.
Nwala Manjaro? Rolling Hapụ ma na-enweghị "ọsọ ọsọ", mmelite na-ewe izu ole na ole iji rute Arch, bụ ebe a na-edozi nsogbu na enweghị nkwekọrịta. Uru niile nke ụwa abụọ. (Can nwere ike ịgwa m na ọ masịrị m, nri? Ebe ọ bụ na ejiri m ya, achọghị m ịmara ihe ọ bụla gbasara Ubuntu, na abụkwa m onye na-akwado Unity)
Zaghachi ka ị dapụ
Ekwenyere m kpamkpam na gị, Canonical ekwesịghị igbu ego na nsụgharị ndị na-abụghị LTS nke ọ na-enweghị onye na-eji.
Ma ọ bụrụ na ha mere ihe ị na-ekwu, ọ bụ na ngwanrọ na-abụghị "mkpa" agaghị enwezi ihe mgbe ochie na repos?
Dịka ọmụmaatụ, ugbu a na Ubuntu 14.10 Agara m ịwụnye egwuregwu 0ad ma achọpụtara m na ọ bụ 1 mbipute azụ. Ọ bụrụ na ọ bụrụ 14.04, ọ ga - abụ 2 ma ọ bụ 3.
Eziokwu bụ na usoro nke ọnwa isii ọ bụla dị m mma maka ndị nwere mkpa karịa ma ọ bụ ọchịchọ ka emelitere yana LTS maka ndị na-achọghị iri isi ha ma hapụ usoro arụnyere ma chefuo ihe ndị ọzọ (dị ka mgbe M tinyere Linux na nna nna m, Linux mint 6 (LTS) na na 17 lee gị
N'ihe ụfọdụ tweaks na Unity nke na-adịghị m mma, sistemụ na kernel ọhụrụ, ka anyị kwuo na ha na-abịa site na decantation maka Debian, Amaghị m ole mmepe / njikarịcha Canonical ga-enye maka nkwụsi ike, wdg. gaa na ụdị ọhụrụ a.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị LTS, nke bụ eziokwu bụ na ọhụụ Ubuntu kachasị ọhụrụ na-agwụ ike, anaghị m ahụ nnukwu ọganihu, sọftụwia ọhụrụ mbụ, ọ bụrụ na nkwụsi ike mana na-abịa site na Debian filter ọ dị ka nnukwu ihe ...
Aga m aga n'ihu na-eji ubuntu maka sọftụwia ya ọgbara ọhụrụ yana ịdị mfe nke iji ppa, mana dị ka ntụpọ gnu / linux (nke dị ka ya ma ọ bụ na ọ chọghị) ọ na-agbago. Ma oburu na ha eme nke oma na smartphones, enwere m olile anya na desktọọpụ adighi
Ọ bụ eziokwu. Ha na-echegbu onwe ha nke ukwuu banyere ekwentị Ubuntu na ihe ma chefuo maka nkesa desktọọpụ ya. Ọ dịlarịrị na Canonical ejiri ezigbo ngwa jupụta Ubuntu (ikekwe nke ha, ikekwe ndị ọzọ ka mma), mana ha na-aga n'ihu na-ewere ngwa site na ọrụ ndị ọzọ ma anaghị eme ọtụtụ mgbanwe. Nsonaazụ? Na-agwụ ike pitch mgbe agwụ ike pitch.
Agbanyeghị, ọ bụrụ n'ịchọrọ iji sọftụwia emelitere + PPA (na nke a AUR), a na m adụ gị ọdụ ịnwale Antergos 😉
Ma ọ bụ chakra, crunchbang (ọ bụrụ na asụrụ ha n'ụzọ ahụ). Y’oburu n’acho “obi uto” karie ka ha tinye Arch na LVM site na XD mbu
Ọ dịkarịa ala usoro 4-5, mana ọ bara uru inwe Arch na LVM ọhụụ.
Banyere Centerlọ Ọrụ Software, ọ dị mwute na ọ gaghị adị na Debian Jessie dị ka Squeeze na Wheezy na-agba nkịtị (ọ tinyeworị uche na Ubuntu na njedebe ikpeazụ ya). Ọ ga-amasị m ka akụrụngwa a nọrọ na Debian Jessie, Mana kedu ihe a ga - eme ma ọ bụrụ na Ubuntu anaghị ebuli ihe kachasị mma ya (Software Center, Unity) n’ebe Debian ma ọ bụ distros ndị ọzọ dị ka ọ ga - adị GNOME, KDE na ihu desktọọpụ ndị ọzọ ọ bụ ezie na m gaara ahụ ya n'anya ma ọ bụrụ na Centerlọ Ọrụ Software dị na Debian Jessie, na ngwa ndị a gbakọtararịị adịworị na desktọọpụ ndị ọzọ.
ubuntu adighi eji upstart rue ugbua? Echere m na ọ dịghị
Zaghachi Mariano Rajoy
N'ezie, anụwo m ihe dị ka nke a, mana site na mkpebi nke Debian ha nọrọ na SysVInit ruo Debian, iji zere nsogbu n'ọdịnihu, nyefee SystemD. Ka m na-echeta, Ubuntu malitere ile anya na Upstart ozugbo Debian na-ele SystemD anya.
Ọ dị m ka ọ na-eji upstart, n'ihi na oge ọzọ m na-eme ụfọdụ obere mmemme na m hụrụ na ọ bụghị usoro 1 (init) na nakweere usoro nke ụmụ mgbei ma a ụfọdụ upstart na-achọ a bit n'ebe ahụ, m rutere na ubuntu ahụ ejighi ya kama ọ malitere elu nke dị ka ụdị dị mma.
Ojiji eji okwu dika ihe, ufodu na ellipsis.
Ọ dị ka onye dere edemede ahụ amaghị ọtụtụ ihe ị ga-atụ anya n'aka Ubuntu 15.04.
Have ga-ewepụ ụfọdụ omume ọjọọ na ederede kwa ụbọchị. Ọ bụghị naanị ịkatọ nkatọ, ị ga-akatọ nke ọma.
Ihe ịga nke ọma na nke ahụ.
Zaghachi George Bool
Ogwe menu ngwa ngwa ọ laa?
Echere m na ọ bụghị, dị ka ihe oyiyi bụghị dịkarịa ala. Ọ dị m ka onye ọ bụla mere edemede ahụghị na na Ubuntu enwere ndị menu ugbua na aha aha.
M ga-eji Ubuntu ma ọ dịkarịa ala nsụgharị 2-3 n'ihi ndị ọkwọ ụgbọala na nsogbu nke ngwanrọ. Mgbe ha rutere GnomeShell na Unity, M na-ahọrọ Gnome maka naanị agụụ (M malitere mandriva 2010 na Gnome) na ọ bụ ezie na ọ bụghị otu n'ime desktọpụ kachasị mma, enwere m mmasị na ya.
Mgbe Ubuntu kwusiri ike na ntọhapụ nke abụọ (ma ọ bụ ndozi) nke ,dị n'Otu, ọ nyere m ọtụtụ nsogbu na Compiz Fusion, echetara m na ozugbo m wụnye conky ma nye m ozi mkpesa ahụhụ, nke ahụ bụ mgbe m gwara Ubuntu .
Na-achịkọta akụkọ ahụ ...
1) dị n’otu nyere m nsogbu dị iche iche.
2) N'oge ahụ onye ọ bụla mere mkpesa banyere Fedora maka ịbịarute mgbe niile karịa atụmatụ na maka egwu dị egwu nke ngwa ya, nke dị na Ubuntu, ọ bụ ezie na ọ ka mma, abụghị ihe kpatara mmasi.
3) M si na windo na-enwe olileanya iji ihe na-adịghị dị ka ya mgbe mberede mgbasa ozi ọhịa na-apụta.
4) Dị ka nzuzu dị ka ọ nwere ike ụda, M kpọrọ asị na-acha odo odo.
5) Na nwanne m nwanyị na pc njikwa ngwugwu nwere nsogbu na mgbe m nyochachara ụbọchị ole na ole enweghị m ike ịchọta azịza n'ihi enweghị oge, ekpebiri m ịtinye. Ọtụtụ ndị enyi bịakwara n'akụkụ ọchịchịrị ahụ nwere otu nsogbu.
Enwere ọtụtụ ndị ọzọ. Enwere m ike ịsị na ihe niile dị n'elu bụ naanị ihe ngọpụ na m chọrọ ịnwale distro nke ga-eme ka m mụtakwuo banyere usoro ahụ. Achọtara m Arch.
Nke a agaghị abụ ọkwa ịhapụ ya? ma obu obu nkpuru asusu ndia
Anọ m na-eche otú m ga-esi wụnye ụlọ ọrụ Mepee, ebe m na-eji OpenLP ma ọ dị ha ka ha dakọtara na ibe ha.
Kedu ihe ị ga-atụ anya ya?… G TON TO NA-atụ Anya ?????
Ajụjụ a dị ịtụnanya, m na-ekwu, si Ubuntu ị gaghị enwe olile anya mana ọ kacha mma !!!!
A sị ka e kwuwe, Ubuntu bụ naanị distro nwere ọdịnihu na Linux, ndị ọzọ, ma ọ bụrụ na ịghara ịga n'igwe ojii ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka, ga-adị ka a pụrụ isi kwuo ya.
N’elu oche ebe ahụ. Agbanyeghị na achọghị m akaụntụ Ubuntu Otu n'eziokwu, mana ngwaọrụ mkpanaka nwere ike ịbụ eziokwu.
Naanị distro na ọdịnihu azụmaahịa ịchọrọ ịsị, mana maka nke a, ị ga-echere ọtụtụ afọ.
Zaghachi ka inuo
GNU / Linux bụ nnukwu obodo. Debian ya nnọọ iche iche nke na-akwado ụkpụrụ ụlọ na niile distros na-na otu ịke dị ka Gentoo ka nwere a mbara ọdịnihu, si n'ebe ahụ ga-enwe ndị ga-"alaka" ndị distros ndị ọzọ nyiwe na-enye ha aka ha. Eziokwu ahụ bụ na Ubuntu na-ekwusi ike na-awakpo ubi ndị ọzọ apụtaghị na ọ bụ nke mbụ ma ọ bụ na ọ bụ naanị ya na-eme ya.
N'iji eziokwu ahụ nke mere na emeghere m okwu a (na ịdị umengwụ ịme ọzọ).
Fanmụ nwoke Ubuntu a na-echetara m ọtụtụ ndị ọrụ DW, ndị birila kemgbe, ha dị jụụ, oyi na-atụ, owu na-ama ha. Ha na-anọ ebe dị anya site na ndị ọzọ. Ndị ọrụ ọhụụ, n'aka nke ọzọ, enweghị izu ike ma dị ike nke na ha na-eme ihe ha ga-emecha kwaa ụta. Site na nke a, a naghị m ekwu na onye ọ bụla na-eme ngwa ngwa bụ onye akpachapụghị anya site na okike, kama ọ bụ na ha ji oke mpako na-ekwu maka ọkọlọtọ ha na-ebu, mgbe enwere (m na-ekwu ihe ọ bụla) ihe ha nwere ike ịmasị karịa, bụrụ nke kwụsiri ike karị , emelitere ọzọ, mara mma, nwee ezigbo enyi. Ma nke a anaghị esite n'otu echiche, ọ nwere ike ịka mma site n'ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ. Maka ugbu a, ana m edebe Arch m wee laghachi maka ọtụtụ ihe mgbe m gụchara akwụkwọ ndị ọzọ gbasara Gentoo.
Aghọtaghị m ihe kpatara eji eri nri na Ubuntu, yabụ gịnị kpatara ide banyere ya?
Kedu ihe anyị ji ya?
Otu edemede nke enweghị mmasị dị otú a na-egosipụta abụghị naanị enweghị ọrụ na enweghị nsọpụrụ maka ndị na-agụ ya. Ka a pụọ! Achọghị m ka m kwụsị ịhapụ blog a.
Agụbeghị m ya n'ụzọ ahụ. N'ezie, mgbanwe ndị e mere na nsụgharị a dị mkpa iji dọrọ uche nke ndị ọrụ GNU / Linux (ọkachasị ndị nwere olile anya n'efu iji Ubuntu dịka "ebe mgbaba ikpeazụ" iji luso SystemD ọgụ).
Banyere menu mmanya jikọtara ya na ogwe aha, ọ dị m ka ọ bụ ezigbo echiche.
Maka oge a, a ga - agba m ume iji Ubuntu mbipute 14.04 (Enwere m oke ịnagide systemd na Debian Jessie).
Ichere ka mma ma budata Debian 8 mgbe ọ na-apụta na ụbọchị ole na ole.
Echere m na Ubuntu nwere ogologo ụzọ ọ ga - aga maka usoro ntinye ọhụrụ ndị a (systemD, wdg), anyị ga-echere iji hụ etu mmemme ahụ si dị mma.
Abụ m otu n'ime ndị malitere na Ubuntu ma hapụ ya ozugbo maka nsogbu ndị ọzọ. Abụ m onye ọhụụ na nsogbu m na 14.04 bụ na enweghị m ike ịmepụta nnweta na desktọọpụ.
Onwe m na-eche ka m nwee ike ịhazi sistemụ na ubuntu na debian maka njikọta nke aghụghọ na nkuzi n'etiti ndị niile distros, enwere ọtụtụ blọọgụ iji nyere ndị ọrụ nke ndị a aka, a ga-emelitekwa wikis. Na mmelite a, enwerekwa ọrụ ọhụụ dịka (dịka ọmụmaatụ) ụlọ ọrụ bluez 5. Ọtụtụ na-eme ememme, n'ezie.
Mgbe enyochachara Ubuntu 15.04 na mbipute 14.04 na otu kọmputa ahụ, enwere mgbanwe pụtara ìhè n'ihe gbasara njiri akụ, Ubuntu 15 amachaghị nke ọma karịa 14, ikekwe ọ bụ okwu nke ndị ọkwọ ụgbọ ala, ma ọ bụ ihe Ubuntu 15 dị oke. Jiri ụdị 32-bit mee ihe abụọ a ...
Zaghachi igacio salgueiro
Onye na-aruko Mu oru !! Na Ngwa Q Ha bụ Homonyms nke Windows na Ubuntu !!
Zaghachi Martin Elias Lopez R
Ọ bụ a **** m *** mere ka PC m niile daa ụda. Ekwesịrị m iji Ubuntu 12.04 hichapụ diski ahụ dum.
Nwoke, gini bu ihe ojoo banyere ihe LTS a. M kwalite na ubuntu 14.10 ma gwụchaa nkwado nkwado. Ọ na-ajụ m ka m melite na 15.10 ma na-eche na ọ ga-enye nkwado maka ọnwa 9. Enwere m njikọ internetntanetị dị oke ọsọ ma ugbu a, mgbe ọnwa 9 gachara, m ga-emelite ọzọ. M ka mma iche banyere iweda ala na 14.04.2 LTS! ma ọ bụ ka mma, gbanwee gaa na nkesa GNU / Linux ọzọ!
Na Ọnụ: Nha na Iwu Ohere